Creative Writing » ငယ်ငယ်တုန်းက ဇလင်းထမုံ	20
ခင်ဇော် says: ဇလုံနဲ့ စားနေပုံထဲတော့ ကိုရီးရားတွေ ညဘက် ထမင်းအေးအေးထဲကို
အောင် မိုးသူ says: မောင်နှမတွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စားတာ မရွံပါဘူး။ စတီးလ်နဲ့စားတာကို မစားတတ်တာ။ ကြွေဇလုံလေးနဲ့ဆို ဘယ်လောက် ကောင်းမလဲနော်။
kai says: နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်ရဲ့.. အသက်ရှည်ရှည် ခင်ခင်မင်မင်၊ လက်ရေတပြင်စီး၊ သီချင်းအရ… မြန်မာတွေ နှီးဒေါင်းလန်းတွေနဲ့ထမင်းစားတာမှာ.. လက်တွေနဲ့နှိုက်တာမို့.. တယောက်လက်ကစီးကျရတဲ့…ဟင်းရည်ဟာ..ဟိုမှာဖက်တယောက်လည်း သွားရည်တွေနဲ့လုံးထွေးစားရတာပေါ့..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… ပုံနံပါတ်၂ က.. ဇလုံစာလေးတော့ (ဘာဇလုံနဲ့လာလာ) စားချင်သား…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ဘီပိုးတော့ ကြောက်တယ်။
kai says: ဘီပိုးက ကာကွယ်ဆေးရှိတယ်.. ဖြစ်ရင်ပျောက်အောင်ကုမရတဲ့..။
ဘယ်ဟာ ပေါက်ကြိုသလဲ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ကျတော်က ဘီပိုး အန်တီဘော်ဒီ အော်တိုပေါ်ပြီးသား Was this answer helpful?LikeDislike 14469
kai says: ကံကောင်းတာပေါ့..။ ကျုပ်မှာဖြင့်..အန်တိုင်ပေါ်ဖို့အရေး အတွဲလိုက် ၂ခါထောင်ထိုးရတယ်..။
Thint Aye Yeik says: မငီးးးးး ရုံးက ပြန်ခါနီးမှ ဝင်ကြည့်လိုက်တာ ။ ဗိုက်ဆာလိုက်တာ… ဂွီ….ဂလွီ….
လုံမလေးမွန်မွန် says: အိမ်မှာဆို အဖေနဲ့ မောင်လေးက အဲဒီလို သိပ်စားတာ . . . ကိုယ်တွေက ချဉ်ပေါင်ဟင်းချက်တဲ့နေ့လောက်က လွဲရင် သိပ်မစားဖြစ်ဘူး . . . ဟိ . . . မစားတတ်ဘူးလို့ ဆိုရမလားပဲ . . .
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်တယ် သိပ်မစားဖြစ်တော့ဘူး။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: နံပါတ် ၃ စားချင်တယ်။ မျှစ်နုနုလေး တွေ ကြိုက်လို့
အောင် မိုးသူ says: ကျတော်လည်း မျှစ်နုနုလေးတွေကြိုက်တယ်
ဂျစ်စူ says: ဇလုံထဲထည့်
မြစပဲရိုး says: စတီး ပစ္စည်း တွေ က ဆေးကြောပြီး အသေအချာ ရေခြောက်အောင် မသုတ်ပေးရင် ရေကွက်ရာ တွေ နဲ့ ရုပ်ဆိုး။
အောင် မိုးသူ says: ကြွေပန်းကန်လေးတွေပဲ ကြိုက်တယ် ဟီးးး
ဂျက်စပဲရိုး says: အဲဒီ ဇလုံ ထမင်း နဲ့ပဲ ကြီးလာရတာ။
ဟီးဟီးဟီး :P :P :P
အောင် မိုးသူ says: :D
Foolish Girl says: ငယ်ငယ်တုန်းကအိမ်ဘေးကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားဆော့ရင်း
ဦးကြောင်ကြီး says: လဖက်ထမင်း စားခြင်တယ်။။။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ကြည့်ရင်းနဲ့ဗိုက်ဆာလာတယ်ကွာ..ရှလွတ်